“. . . သတ်ရသောအချိန်နှင့် အနာပျောက်စေရသော အချိန်လည်း ရှိ၏၊၊ ဖြိုဖျက်ရသော အချိန်နှင့် တည်ဆောက်ရသော အချိန်လည်း ရှိ၏၊ (ဒေသနာ ၃း၃) ငါနှင့်ငါ့အိမ်သား ဖြစ်လျှင် ထာဝရဘုရားကိုသာ ဝတ်ပြုမည်
This entry was posted on April 9, 2015 by thawngno in Articles Bible Study, People of the Bible and tagged Thawngno.	Shortlink